यस्ता छन् लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भोजपुर विकासको प्रतिवद्धता (पूर्णपाठ) - Medianp
यस्ता छन् लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भोजपुर विकासको प्रतिवद्धता (पूर्णपाठ)
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २९, २०७४१०:१०0
काठमाडौं, २९ कात्तिक । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले भोजपुर विकासका योजना र प्रतिवद्धता पत्र जारी गरेको छ । कांग्रेस, संघिय समाजवादी फोरम, राप्रपा सहभागि गठबन्धनले भोजपुर विकासको खाका सहितको प्रतिवद्धतापत्र ल्याएको हो ।
मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ल्याइएको प्रतिवद्धता पत्रमा आगामी ५ वर्ष भित्रमा भोजपुरमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रम समावेस छन् ।
प्रतिवद्धता पत्र कृषि, सूचना तथा संचार, स्वास्थ्य, पर्यटन, सडक यातायात तथा पुल व्यवस्थापन, विद्युत तथा उर्जा, वस्ती विकास, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, खानेपानी, सिंचाइ तथा ढल लगायतका विषयमा केन्द्रीत छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा उमेशजंग रायामाझी, प्रदेशसभा (क) मा अजम्बर काङमाङ राई र प्रदेशसभा (ख) मा गोविन्द कार्की चुनावी मैदानमा छन् ।
हेर्नुहोस् प्रतिवद्धता पत्रको पूर्ण पाठः
आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनीतथा दाजुभाइहरु !नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति, स्वतन्त्रता, र लोकतन्त्रको स्थापना तथा स्थायित्वका निम्ति भएका सबै आन्दोलनहरु खासगरी २००७, २०३३, २०३६, २०४६ र २०६२/०६३ लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो जिवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रती भावपूर्ण श्रदान्जली अपर्ण गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस भोजपुर सम्पूर्ण भोजपुर बासीहरुमा हार्दिक अभिवादन गर्दछ ।
नागरिक स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि विगत ८० बर्षदेखि हुँदै आएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रत्येक काल खण्डमा सबै प्रकारका सङ्र्घषको मोर्चामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने भोजपुर जिल्लाका तमाम तरुण विद्यार्थी, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, महिला, दलित, शिक्षक, प्राध्यापक, वुद्धिजीवी, वकिल डाक्टर, इन्जिनियर, सञ्चारकर्मी, साहित्यकार, कलाकार, उद्यमी व्यवसायी, कर्मचारी एवम् विभिन्न पेसामा आबद्ध रहनु भएका भोजपुरबासीको दृढ लोकतान्त्रिक चाहना, सङ्र्घस र सङ्कल्पलाई नेपाली काङ्ग्रेस भोजपुर हार्दिकताका साथ अभिनन्दन गर्दछ।
हाम्रो श्रद्धापूर्ण सम्झनामा यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसका लाखौं लाख जुझारु नेता, कार्यकर्ता एवम्शुभेच्छुक साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यो करिब ८० वर्षको दौरानमा विभिन्न समयमा जेलनेल, निर्वासनको पीडा र मृत्युलाई समेत परवाहनगरी गरेको वलिदानीका कारणराजतन्त्रको समेत अन्त्य भएको छ ।
हजारौं सङ्ख्यामा अंगभंग, लाखौंको सङ्ख्यामा घरबारविहीन र विस्थापित त्यस्ता लोकतन्त्रप्रति आस्थाका धरोहरहरुप्रति हामी सदा उच्च सम्मान प्रकट गर्दछौँ । हामी भोजपुरबासी नेपाली जनता आज जुन धरातलमा स्वतन्त्रतापूर्वक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेका छौं, यो तिनै प्रजातान्त्रिक योद्धाहरुको साहसिक सङ्घर्ष र वलिदानीको परिणाम हो, जसलाई हामी २००७ सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिका नेता जननायक वी.पी. कोइराला,श्रद्धेय नेता सुवर्ण समशेर,सर्वोच्च कमाण्डर एवम्लौह पुरुष स्वर्गीय गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला,सुशील कोइराला,धनवीर परियार,महेन्द्र नारायण निधि तथा शेख इद्रिशलगायतलाई श्रद्धा अर्पण गर्दछौँ ।
२००७ फागुन ७ गते नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको जग बसाउने कामका महत्वपूर्ण प्रजातन्त्रका योद्धाहरु जसले भाजपुर जिल्लालाई २००७ मङ्सीर २४ गते राणा सरकारको पञ्जाबाट बिना रक्तपात मुक्त गराई काठमाण्डाैं सम्म अभियान चलाउन सफल भोजपुरकानारदमणी थुलुङको नेत्रृत्वमा जनमुक्ति सेनाका कमान्डर रामप्रसाद राई, कर्णबहादुर राई, इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, जगतबहादुर राई, मुक्तिप्रसाद चापागाईं, खड्गबहादुर कार्की, श्रीपाल राई, दोर्ची तामाङ्ग, भूदेव राई, मानबहादुर राई, पञ्चबहादुर राई, जगुमाया राई, पर्शुराम राई, दानबहादुर कार्की, केदार श्रष्ठ, बखतबहादुर राई, दानबहादुर शाक्य, पशुपति कोइराला, पदमबहादुर राई, पूर्णप्रसाद राई, मनपाल राई, जर्नबहादुर राई, कितावसिंह राई, ओमप्रसाद राई, धनकृष्ण राईहरु जस्ता प्रजातन्त्रका सयौँ महान ऐतिहासिक योद्धाहरुलाई हामी सगौरव उच्च सम्मान साथ वीर–वीरङ्गनाका रुपमा स्मरण गर्दछौं ।
सशस्त्र विद्रोहका कारण मारिएका दानबहादुर कार्की, धर्मराज तिवारी, महेन्द्र राई, टेकबहादुर कार्की, भक्तबहादुर बस्नेत लगायतका लोकतन्त्रबादी महानुभावहरु प्रति श्रदासुमन अर्पण गरिन्छ। यसै क्रममा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धाहरु स्वर्गीय हेमराज कोइराला, निर्मल खत्री लगायतका अग्रजहरुलार्ई हामी उच्च सम्मानका साथ स्मरण गदैछौँ।
प्रतिवद्धता र संकल्प
नेपाली राजनीति यतिबेला नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सङ्घीय ढाँचामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाकोे निर्वाचनमा मुलुक होमिँदै छ । नेपाली काङ्गे्रसको विगत आठ दशकदेखिको मुलुक र मुलुकवासीलाई विभिन्न कठिनाइहरुबाट मुक्ति दिलाउँने क्रममा एकतन्त्रीय निरङ्कुश जहानीया राणा शासन एवम् पञ्चायती शासनको अन्त्य, विभिन्न वाद वा सिद्धान्तका आवरणमा भएका आततायीपूर्ण हिंसात्मक गतिविधिहरुको शान्तिपूर्ण अवतरण, राजतन्त्रको विदाइ तथा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै सिंहदरबारमा रहेको जनताको अधिकारलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार विकेन्द्रित स्वरुपमा जनताको अधिकार आफैँले प्रयोग गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सस्थागत स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा अपवित्र वाम गठबन्धनका नाममा एकदलीय अधिनायकवादको स्थापना गरी हजारौं वीर शहिदहरुको वलिदानीपूर्णसङ्र्घसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलगायत लोकतन्त्रमा आस्थावान तमाम बुुद्धिजीवी, तरुण, विद्यार्थी, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, महिला, दलित, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल डाक्टर, इन्जिनियर, सञ्चारकर्मी, साहित्यकार, कलाकार, उद्यमी व्यवसायी, कर्मचारी एवम्विभिन्न पेसामा आबद्ध रहनु भएका तपाईं सम्पूर्ण भोजपुरबासीहरुले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि विवेकपूर्ण पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली काङ्ग्रेस भोजपुर विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछ ।
यी कठिन इतिहासलाई स्मरण गर्दै सचेत भोजपुरे जनताहरुले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उमेद्वारहरुलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरी काङ्ग्रेसलाई जिम्मेवारी सुम्पिने कुरामा विश्वस्त छौँ र जनताको त्यस्तो विश्वासलाई सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरी भोजपुर जिल्लालाई आर्थिक समृद्धि तर्फ फड्को मार्ने दृढ सङ्कल्पसाथ प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं । नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्रृत्वमा बन्ने सरकारले आगामी ५ वर्ष भित्रमा भोजपुर जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा देहाय बमोजिमको नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्नेछः
कृषिनै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई आधुनिकीरण गर्दै व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास आजको अपरिहार्य आवस्यकता हो ।
व्यवसायिक कृषि विकासका लागि व्यावसायिक कृषकलाई कृषिमा अनुदान तथा सहुलियत ऋणको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
पशु: विउ र बालीको विमाको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
उत्पादित कृषि उपजलाई सहकारी संस्था मार्फत सहज बजार व्यवस्थापन र त्यसको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
कागती, सुन्तला, बेसार, अदुवा, हर्रो,बर्रो अमला अलैची,अम्लिसो, किवी, चिराइतो, चिया, कफी, बेसार, सुर्ती जस्ता फलफुल तथा नगदेवाली हरुलाई अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागिउत्पादनमा व्यापकता एवम् विशिष्टता तथा प्रशोधनमा स्थानीयताकार्यक्रमबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन समेतको व्यवस्था मिलाइने छ ।
प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने छ ।
स्थानीय पुराना रैथाने जातका पशु पंक्षीहरुको संरक्षणको नीति अवलम्बन गरिने छ ।
प्रत्येक गाउँपालीकामा विशिष्टिकृत स्वायत्त कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिने छ ।
शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार
सबैका लागिअनिवार्य, निशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा लागू गरिने छ ।
जिल्ला स्तरमा एउटा अपाङ्गता मैत्री विद्यालय सञ्चालन गरीने छ ।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न एक पालिका एक नमूना आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रत्येक विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न दिवा आवासको व्यवस्था मिलाइने छ ।
प्रत्येक वडामा एउटा नमुना व्यावसायिक विद्यालय सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
प्रत्येक गाँउ तथा नगरपालिकामा विज्ञान विषयको एक/एक वटा माध्यामिक विद्यालय र भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा विज्ञान विषयको पठन पाठनको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
घोरेटारमा स्नातक स्तरको पठनपाठन प्रारम्भ गरिने छ ।
षडानन्द विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि पुर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी गरीने छ ।
प्रत्येक वडामा Land line फोनको ब्यबस्था गरिने छ ।
आवश्यकता अनुसार मोवाइल टावरको थप व्यवस्था गरिने छ ।
रेडीयो तथा टेलीभिजन स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाइने छ ।
नगर/गाउँपालीकाबाट Rural Metro FM/TVChannel सञ्चालन गरीने छ ।
प्रत्येक नगर/गाँउपालीकामा अत्याधुनिक “इ–चौतारी”को स्थापना गरिने छ ।
प्रत्येक विद्यालयमा ई–पुस्तकालयको व्यवस्था गरिने छ ।
हाल प्रत्येक वडामा भएका उपस्वास्थ्य चौकीहरुलाई व्यवस्थित गर्दै थप सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लगिने छ । भौगोलिक अवस्था हेरी थप उपस्वास्थ्य चौकीहरुको प्रबन्ध गरिने छ ।
हरेक गाउँपालिकामा एक एक वटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
कुनैपनि असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका तथा गरिब व्यक्तिले औषधोपचारबाट वञ्चित भई अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने ध्येयका साथ नागरिक स्वास्थ्य विमा अनिवार्य गराई त्यस्ता असाहय व्यक्तिहरुका लागि निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ ।
रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नबाट बच्नु नै उत्तम (Prevention is better than cure) भन्ने सिद्धान्त अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु व्यापक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
बाह्रै महिना हरियोसागसब्जीको लागिएकघर एक करेसाबारीको अभियान लागू गरिने छ ।
प्राङ्गारिक खाना नागरिकको स्वास्थ्य जीवन बाच्ने चाहना कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।
भोजपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल तथा कलेजो अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा र दिङ्गला र घोरेटार अस्पताललाई शिक्षाण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने छ ।
पर्यटन, धर्म तथा संस्कृति
प्रत्येक वडा, गाउँपालिकार नगरपालिकाहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन गरी आर्थिक उन्नतिका लागि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसै अनुरुपका नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिने छ ।
सिद्धकाली मन्दिर र टक्सार स्थित सरस्वती गुफालाई उत्खनन् तथा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने छ ।
दलगाउँ, निगाले स्थित चुचुली किरातेश्वरथान तथा गुफाको उत्खनन् तथा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने छ ड्ड दिल्पा अन्नपूर्णमा रहेको आरन ढुङ्गाको संरक्षण तथा संवद्र्धन गरिने छ ।
हतुवागढी दरवारलाई सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गरिने छ ।
लेकाली भेगको आकर्षणको केन्द्रका रुपमा चिनिने चिमाल लगाएत लालीगुँरास संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
षडानन्द र योगमायालाई राष्ट्रिय विभूतिको मान्यता दिन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
षडानन्द र योगमाय सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने छ ।
ईश्वरी गुफा जोगेपाथर दुम्मानालाई उत्खनन् तथा प्रवद्र्धन गरिने छ ।
जलेश्वर महादेवस्थान गुफा खाटाम्माको विकास तथा प्रवद्र्धन गरिने छ ।
तुम्लिङ्टार, मझुवावेशी, चौकीडाँडा, डिलखर्क, खाटम्मा, आहाले, पोरुछाप ,रावा, जौवारी, साल्पा पोखरी, सिलिचुङ्ग, लौरेथान, हाँसपोखरी र मैयुम जस्ता स्थलहरुलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरी आर्थिक समृद्धिको दिगो व्यवस्थापन गरिने छ ।
मैयुम,सुन्तले, पामाखाँम वतासे डाँडा, ट्याम्के आदि स्थानहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको गल्फ कोर्टका रुपमा विकास गरी खेल पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने ।
ट्याम्के भ्यू टावरको कामको वास्तविकता अध्ययन गरी बाँकी कामलाई अघि बढाइने छ ।
पहिचान क्षेत्र विकासका लागि किराँत सङग्रहालयको स्थापना गरी यस जिल्लामा बसोबास गर्ने सबै जातजाति, भेषभूषा, कला, धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित चित्र तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुलाई सङग्रहित गरिने छ ।
पेन्सन गढी, पाताले गुफा (अरुण गा.पा.) लाई पर्यटकिय आकर्षणको केन्द्रको रुपमा विकास गरीने छ ।
हतुवागढीको जोरआहाल,सयबृक्ष रामप्रसादराई गा.पा.को पखुवा देवधाम, गोल्मे भिरलाई पर्यटकीय क्षेत्र विकास गरिनेछ।
सेल्मेडाँडामा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय तथा पार्क स्थापना गरिने छ ।
प्रत्येक पर्यटकीय स्थानमा जान सुविधाजनक पदमार्ग निर्माण गरिने छ।
सवै जात–जातिका लागि जातिय सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिने छ ।
जातीय परम्परा अनुसार सबै जात जातिका लागि पानीको व्यवस्था सहितको सुधारिएको घाट, कपुरथान, मलामी प्रतीक्षालय तथा सुरक्षित मलामी मार्ग निर्माण गरिने छ।
सडक, यातायत तथा पुल व्यवस्थापन
सबैगाउँ तथा नगरपालिका केन्द्रहरुमा प्रत्येक वडाहरुलाई जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिनेछ।
पाङ्चा,चखेवा, भोजपुर घोडेटार सडक तत्काल जोडिनुका साथै स्तरोन्नति गर्दैकालोपत्रेको लागिव्यवस्था मिलाइने छ ।
चतराघाट–भोजपुर सडक निमार्ण, विस्तार तथा स्तरोन्नतिगरिने छ ।
प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा वडाकेन्द्रहरु जोडिने गरी चक्रपथ निर्माण गरिने छ ।
कुडुलेघाट–डाडाँबोखिम–मानेडाँडा–धापखर्क–भोजपुर सडक निर्माण गरिने छ ।
दावाँ–बागखोर सडक निमार्ण गरिने छ ।
कुदाककाउले–भोटेछाप–मानेडाँडा–छाँगेचौर–साउनेडाँडा–मैंयूडाँडा हुँदै धाद्रेसम्म को सडक निर्माण गरी मध्य पहाडी लोकमार्गसँग जोडिने छ ।
हसनपुर चुवार (मछिन्टार) बाट उदयपुर जोड्रने, मचुवाटारबाट धनकुटा जोड्ने मोटरयोग्य पुल निर्माणको पहल गरिनेछ।
तत्कालीन माननीय शहरी विकास मन्त्रि डा. नारायण खड्काको विषेश पहलमा सम्माननीय प्र.म.श्री शेरबहादुर देउवाद्वाराशिलान्यास भइसकेको पाङचा–रानीटार (उदयपुर) जोड्ने पक्की पुल निमार्णकार्यलाई शीघ्र रुपमा अघि बढाई आगामी १ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गराइने छ ।
राईघाट पक्कीपुल, अँधेरीघाट (सानो दुम्मा) पक्कीपुल कुडुलेघाटपुल तुम्लिङ्टार कात्तिके घाट पुल निर्माण तथा लम्सुवा पुलको काम तत्काल अघि बढाइनेछ ।
आवश्यकताअनुसार मोटरयोग्य तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने छ ।
विद्युत तथा उर्जा
केन्द्रीय प्रसारण लाइनलाई क्रमशः तीव्र रुपमा विस्तार गरी १ वर्षभित्रमाभोजपुर जिल्लाका सबै गाउँ बस्ती सम्म विस्तार गरिने छ ।
हाम्रो पानी हाम्रै लगानी अभियानअन्तर्गत आ–आफ्नो वडा, टोल, गाउँपालिकामा रहेको खोलानाला आदिबाट प्रत्येक घरको शेयर रहने गरी लघू तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुसञ्चालन गरी कम्तीमा १०० मे.वा विद्युत उत्पादन गरिने छ जसवाट हजारौं मानिसले रोजगारी पाउनेछन् ।
विन्ड मिल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनगरिने छ ।
नदी साझा आम्दानी आधा आधा भन्ने मान्यतानुसार अरुण तथा सुनकोशी नदीमा सञ्चालित हुने सबै खाले आयोजनाबाट जिल्लाले क्षतिपूर्ति र लाभांश पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ ।
सिक्तेल खोला सानो जलबिद्युतको मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
खेलकूद प्रतिष्ठान, भोजपुरको स्थापना गरी सो अन्तरगत प्रत्येक वडाहरुमा एक एक सुविधा सम्मन्न खेलमैदानको निर्माण गरी खेलकूदको स्तरोन्नति गरिने छ ।
भोजपुर सदरमुकाम स्थित टुडिखेलको आवश्यक विस्तार तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।
एकीकृत वस्तीविकासको अवधारणा अनुसार शहरीकरण प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।
नगरपालिकाहरुमानमुना स्मार्ट सिटिको विकास गरिने छ ।
एक वस्ती एक पार्क निर्माण गरिने छ ।ड्ड सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन गरिने छ ।
पारपानीदेखि सुन्तलेसम्मको क्षेत्रलाई आधुनिक शहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास तथा व्यवस्था मिलाइने छ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यलय तथा परिसरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण तथा स्थापना गरिने छ ।
स्थानीय तहहरुको तहगत स्तरमा Government Village (सरकारी कार्यलयहरुको एकीकृत स्थल) विकास तथा व्यवस्थापन गरिने छ ।
प्रत्येकवडामा बिपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी योजना तयार गरी कार्यन्वयन गरिने छ ।
खानेपानी, सिंचाइ तथा ढल
मौजुदा पानीका मुहानहरुको प्रकृति मैत्री सदुपयोग, वस्ती भन्दा मुनिको नदि तथा खोलाहरुबाट पम्पिङ्ग तथा लिफ्टिङ्ग जस्ता विधिहरुको प्रयोग गरी “एक घर एक धारा” खानेपानीको व्यवस्थापन गरिने छ ।
वर्षा यामको पानीलाई सङ्कलन गरी हिउँदमा करेसाबारी तथा बोटबिरुवाका निम्ति सिंचाइ गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ ।
नेपाल सरकार वाट वर्तमानमा वितरण गरीदैँ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १००० थप गरीदैँ लगीने छ ।
प्रत्येक टोलबस्तीमा १/१ वटा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक उद्यान तथा वाल उद्यान निमार्ण गरिने छ ।
पीडित तथा असहाय महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि जिल्ला स्तरमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
भिन्न क्षमता भएका नागरिकहरुका लागिविशेष कार्यक्रमका माध्यमबाट सहज वृृत्ती बिकासको व्यव्स्था मिलाईनेछ।
विपन्न तथा बञ्चितीकरण परेका सबै जात जातीका मानिसहरुलाई विशेष आर्थिक कार्यक्रमका माध्ययमबाट जिवीकोपार्जन तथा स्तरोन्नतिको प्रवन्ध गरीने छ ।
द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका परिवारजनको पुर्नस्थापनाको प्रबन्घ गरिनेछ र कब्जा गरिएका घरजग्गा तथा लुटिएका सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
दुम्माना, जरायोटार, कुमालटार,मछुवाटार तथा बुम्लिङ्गटार जस्ता फाँटहरुको पहिचान गरी सिंचाइ तथा खानेपानीको व्यवस्था गरी शहरीकरण एवम्निकासी नाकाको रुपमा विकास गरिने छ ।
दिङ्गला विकास वृहत्तर गुरु योजना लागु गरी भोजपुर उत्तरलाई एक नम्बर प्रदेशको आर्थिक केन्द्र (Economic-hub) का रुपमा विकास गरिने छ ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा बृहत्तर गुरुयोजना लागू गरि समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गरिनेछ।
प्रत्येक गाउपालीकामा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु मार्फत आर्थिक कारोबारलाई बैकिङ्ङ्ग प्रणालीमा आबद्ध गररिनेछ।
हालसम्म करारोपण हुन नसकेका रुद्राक्ष,चिराइतो सतुवा लगायतका उत्पादनहरुलाई करको दायरामा ल्याउने तथा करार योग्यबनाईनेछ ।
जीर्ण औद्योगिक नगरी टक्सारलाई पुनः औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा पुनस्थापना तथा विकास गरिने छ ।
हाम्रा अनन्त प्राकृतिक भण्डारमा भएको स्वस्थकर पानीलाई खाडी मुलुकका बजारलाई लक्षित गरीनदी बोतलमा परियोजना सञ्चालन माध्यमबाट रोजगारीका अवसर तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत निमार्ण गरिने छ ।
रोजगारी तथा आयआर्जन
कम्तीमाएक घर एक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी थप एक लाख बेरोजगारहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।
रोजगारीको खोजीमा भारत तथा खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने छ ।
व्यवसायीक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी व्यबसायीक तालिमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
भोजपुरे खुकुरी एबं उद्योग तथा उत्पादन लाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाईनेछ ।
विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित किशोरी तथा महिलाहरुका लागि आयमूलक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरीने छ ।
प्रशासनिक सुधार ड्ड कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विभेदमा परी कमजोर मनोवल बोकेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ।
पेसागत मर्यादाको पालना र कार्यसम्पादन कर्मचारी मूल्याङ्कनका स्पष्ट आधार बनाइनेछ ।
जनहित एवम् प्रचलित कानूनबिपरित काम गर्ने कर्मचारी तथा जन प्रतिनिधिलाई तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया सुरुगरिने छ ।
परिणाममुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।
अन्तमा, अहिलेसम्म तपाईं हामीले भोजपुर जिल्लाबाट पटक पटक भएका संसदीय निर्वाचनमा होस् वा स्थानीय निर्वाचनमा विजयी गराएर पठाएका एमाले तथा माओवादीका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका विविध क्रियाकलाप र काण्डलाई मनन गर्दैवाम गठबन्धनका नाममा लाद्न खोजिएको एकदलीय अधिनायकवादको दुष्प्रयासलाई रोक्दै लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, मुलुकको सम्बृद्धि एवम् भोजपुर र भोजपुरे जनताको समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट सङ्घीयसभाका उमेद्वार नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व महामन्त्रि, महासमिति सदस्य श्री उमेशजंग रायामाझी र प्रदेश सभाका लागि भोजपुर क्षेत्र नं. २ (ख) का उमेद्वार जिल्ला कार्य समितिका पूर्व सचिव, महासमिति सदस्य श्री गोविन्द बहादुर कार्कीलाई चुनाव चिन्हरुखमा र प्रदेश सभाका लागि भोजपुर क्षेत्र नं. १ (क) का उमेद्वार सङ्घिय समाजवादी फोरम नेपालका सचिवश्री अजम्बर राई काङवाङ लाई चुनाव चिन्ह मशालमाआफ्नो अमूल्य मतदान गरी सबै उमेद्वारहरुलाई विजयी गराउनहुन तपाईं तमाम विवेकशील भोजपुरवासी आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा नेपाली काङ्ग्रेस भोजपुर हार्दिकताका साथ अपिल गर्दछ ।